Nubia Red Ime Anwansi 3: Nkọwa, Ahịa na Mwepụta | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Ngwa gam akporo, Mobiles
Anyị na-anụ ọtụtụ asịrị banyere Nubia Red Magic 3 maka ọnwa. Ọ bụ ekwentị egwuregwu ọhụụ nke akara ndị China, nke bụ otu n'ime ụdị kachasị atụ anya na mpaghara ahịa a. Enweela ụdị asịrị dị iche iche banyere ya, dị ka ike batrị gị ma ọ bụ ya ike na asọmpi dị iche iche. N'ikpeazụ, mgbe oge a nile gasịrị, e gosipụtara ekwentị ugbu a.
Ya mere, anyị nwere data niile na ekwentị ọhụrụ a. Dị ahụ egosighi ọtụtụ ekwentị n'afọ a, ọ bụ ezie na anyị hapụrụ Alpha ọhụrụ. Ugbu a, anyị chee atụmatụ ọhụrụ ha na ngalaba egwuregwu. Nubia Red Magic 3 a bụ ekwentị akpọrọ ka ọ mara.
Maka imewe nke ekwentị ahụ, akara ndị China nwere ihe ijuanya na-enweghị atụ, mana nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke a. Ezigbo ihe eji egwu egwuregwu. Ihe bụ ihe ọzọ, na ekwentị a anyị hụrụ onye ofufe n'ime. Ekele ya, ikpo ọkụ nke ihe nchọgharị ahụ kwụsịrị. Ọ ghọrọ ekwentị mbụ na ahịa iji sistemụ a.
1 Nkọwa Nubia Red Magic 3
Nkọwa Nubia Red Magic 3
Na ọkwa teknụzụ, anyị ahụla ụfọdụ nkọwa nke Nubia Red Magic 3 na izu ndị na-adịbeghị anya. Ama dị ike, nke egosiri dị ka nhọrọ ọzọ dị mma na ngalaba egwuregwu. Ka ọ were nwere ike ịlụ ọgụ na Black Shark 2 nke gosiputara na nso nso a. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ngosipụta: 6,65-inch AMOLED nwere mkpebi nke 2.340 x 1.080 pikselụ
Nchekwa: 64/128/256 GB
Igwe n'ihu: 16 MP
Igwefoto na-abịa: 48 MP
Batrị: 5.000 mAh
Njikọta: GPS, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth, USB-C, isi okwu isi,
Ndị ọzọ: Mkpịsị aka mkpịsị aka, fan n'ime
Sistemụ nrụọrụ: A gam akporo
Usoro jụrụ oyi bụ otu n'ime ike nke Nubia Red Magic 3. branddị ahụ na-ekwu na ekele ya na ha nwere ike debe ekwentị 5 degrees oyi karịa ekwentị ndị ọzọ. Otu akụkụ nke doro anya dị oke mkpa mgbe ị na-egwu egwu na ngwaọrụ ahụ, ka ị nwee ezigbo ahụmịhe onye ọrụ n'oge niile.
N'adịghị ka ekwentị ndị ọzọ na njedebe dị elu, akara ndị China nwere nzọ na iji otu igwefoto azụ na ngwaọrụ. Anyị na-ahụ ihe mmetụta 48 MP. Obi abụọ adịghị ya, ntinye aka na ihe mmetụta dị ike, mana na ekwentị nke igwefoto abụghị isi ya. Ike na inwe ike igwu egwu ruo ọtụtụ awa bụ akụkụ kachasị mkpa na nke a. Na mgbakwunye, anyị na-ahụ batrị ikike 5.000 mAh na ekwentị. Na mkpokọta na Snapdragon 855 processor na ọnụnọ nke Android achịcha, anyị nwere ezigbo ọchịchị kwadoro.
Dị ka ọ dị na mbụ n'okwu ndị a, emeela ka ekpughere ekwentị ahụ na China. Agbanyeghị na enwetabeghị nkọwapụta maka mbupụta mba ụwa ọ ga-ekwe omume. Ọ bụ ezie na ọ ga-adị n'oge na-adịghị anya data ọhụrụ na nke a. Ebe ọ bụ na ihe niile na-egosi na anyị nwere ike ịtụ anya nke a Nubia Red Magic 3 na Europe.
Dị ka anyị hụrụ na nkwupụta ya, ekwentị na-abịa na nsụgharị dị iche iche na usoro nke RAM na nchekwa dị n'ime. Ka onye ọrụ ọ bụla nwee ike ịhọrọ ụdị nke Nubia Red Magic 3 nke kachasị mma maka ihe ha na-achọ n'ọnọdụ ha. Anyị nwere ọnụahịa ịgbanwe maka nke ọ bụla n'ime nsụgharị nke ekwentị. Ndị a bụ ọnụahịa ha:
Versiondị nke nwere 6/64 GB ga-enwe ọnụahịa banyere euro 385 iji gbanwee
Ihe nlere anya na 6/128 GB ga-efu ihe ruru 426 euro iji gbanwee
Versiondị ya na / 128 GB biara na ọnụ ahịa ihe dị ka euro 465 iji gbanwee
Ihe nlere anya na 12/256 GB ga-efu ihe ruru 573 euro iji gbanwee
Anyị na-atụ anya ịnụkwu banyere mmalite mba ya n'oge na-adịghị anya.. Ọzọkwa ma a ga-ebupụta nsụgharị niile nke ekwentị na ahịa Europe ma ọ bụ na ọ bụghị. N'echiche a, enweghị data. Kedu ihe ị chere gbasara Nubia Red Magic 3?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Emeela Nubia Red Magic 3
Ngwa kachasị mma ịgbaso nsonaazụ ntuli aka izugbe nke 2019 site na Smartphone gị